I-China Dual purpose wrench, ratchet dual-purpose wrench, portable car ratchet wrench, double open wrench, box wrench, adjustable wrench factory and manufacturers | Boda
Ukudonsa kwenhloso emibili, ukusonta okunamacebo amabili, ukusonta kwekhanda okuhambisa ngesandla, ukusonta okuvuleke kabili, ukusonta kwebhokisi, ukusonta okulungiswayo
Ukuhlukaniswa nokusetshenziswa kwesipanela:
AmaSpanners ahlukaniswe izinhlobo ezimbili ngokuyisisekelo, isikrufu esifile nesisuli esiphilayo. Owokuqala ubhekisa esikhungweni esinenombolo engaguquki ebhaliwe kuso, kuyilapho lesi sakamuva siyisipina esishintshayo.
1.Isipanela esiqinile: umkhawulo owodwa noma yomibili imikhawulo yenziwa ngokuvulwa kosayizi ongaguquki, osetshenziselwa ukugoqa amantongomane noma amabhawodi osayizi othile.
2.I-Box spanner: yomibili imikhawulo inembobo enezinhlangothi noma ishumi nambili ekhoneni lendawo yokusebenza, efanelekile isikhala esincane sokusebenza, ayikwazi ukusebenzisa isikhathi esivamile sokusonta.
3. Ukudonsa kwenhloso okubili: umkhawulo owodwa uyefana nesipanela esisodwa esiqinile, esinye isiphetho siyafana nesipanela sendandatho, futhi amabhawodi noma amantongomane okucaciswa okufanayo afakwa emikhawulweni yomibili.
4. Isipanela esingashintsheka: ububanzi bokuvula bungashintshwa ngaphakathi kobubanzi obuthile besayizi, futhi bungasetshenziselwa ukuvula imishudo noma amantongomane okucaciswa okuhlukile. Izici zokwakheka komsele ukuthi umhlathi ongaguquguquki wenziwa umhlathi oyisicaba onamazinyo amahle; umkhawulo owodwa womhlathi osusekayo wenziwa umhlathi oyisicaba; omunye umkhawulo wenziwa umhlathi ogqamile onamazinyo amahle; ngokucindezela phansi isibungu, umhlathi osusekayo ungasuswa ngokushesha futhi ukuma komhlathi kungashintshwa.
5. I-Hoan spanner: eyaziwa nangokuthi i-crescent wrench, esetshenziselwa ukuvula ubukhulu be-nut eyisicaba esivinjelwe.
6. Isikrufu sesokhethi: sakhiwa amasokhethi amaningi anembobo enamacala ayisithupha noma imbobo eyishumi nambili, futhi ifakwe isibambo, induku yokwelulwa nezinye izesekeli. Ilungele ikakhulukazi amabhawodi noma amantongomane anokuma okuncane kakhulu kwesikulufu noma ukucindezeleka okujulile.
7. Isikrufu seheksagoni: I-hexagon bar wrench emise okwe-L, esetshenziselwe ukuguqula ngezikulufo zeheksagoni. Imodeli yesikeresi seheksagoni isuselwe kusayizi wohlangothi oluphambene lweheksagoni, futhi usayizi webhawodi unezinga likazwelonke. Injongo: isetshenziselwa ngokukhethekile ukuqinisa noma ukuqaqa amantongomane azungezile kumathuluzi omshini, izimoto nemishini yokusebenza.
8. I-Torque wrench: ingabonisa i-torque esetshenzisiwe lapho ugoqa ibhawodi noma umuthi; noma lapho i-torque esetshenzisiwe ifinyelela inani elishiwo, izothumela isignali yokukhanya noma yomsindo. I-torque wrench isetshenziselwa umhlangano ne-torque ebekiwe.
Ukusetshenziswa kwenhlanganisela yokusonta: isikhulisi esikhulu sezinhloso ezimbili senzelwe uphethiloli, amakhemikhali, ukusansimbi, ukukhiqizwa kwamandla, ukucwengwa kukawoyela, ukwakhiwa kwemikhumbi, i-petrochemical nezinye izimboni. Kuyithuluzi elidingekayo lokufakwa kwemishini, ukugcinwa kwamadivayisi nezinto zokusebenza. Ukudonsa kwenhloso okubili kuhlukaniswe ngohlelo lwemethrikhi nohlelo lwesiNgisi. Izinto zokwenziwa kwesikiseli / inhlanganisela yezinhloso ezimbili: isikrufu esenzelwe izinhloso ezimbili senziwe nge-carbon engu-45 ephakathi yensimbi noma i-40Cr alloy steel. Izinga lokukhiqiza le-wrench dual purpose: GB / t4392-1995 (percussion solid wrench and percussion box wrench). Izici zemisonto enezinhloso ezimbili: ukusonta / inhlanganisela yezinhloso ezimbili isungulwe ngensimbi ephezulu yekhabhoni yensimbi noma insimbi esezingeni eliphakeme. Inezici zokuklanywa okufanelekile, isakhiwo esizinzile, ukuminyana kwempahla ephezulu, ukumelana nomthelela oqinile, akukho ukusonga, ukuqhubeka, ukungagoba, ukunemba okuphezulu nokuphakama nokuqina.Impahla yesipanela esingaguquguqukayo kufanele ibe:
1. Insimbi yeChromium vanadium: uphawu lwamakhemikhali i-CR-V, olusezingeni elingcono lensimbi.
2. Insimbi yeCarbon: ikhwalithi ijwayelekile, futhi kuningi emakethe.
Ukudonsa uhlobo lwamathuluzi wokufaka nokususa asetshenziswa kakhulu empilweni, asetshenziselwa ukuvula amabhawodi noma amantongomane.
Kunezinhlobo ezimbili zama-spanners, i-wrench esinqunyiwe kanye ne-wrench eguquguqukayo. Esokuqala sibhekisa esitsheni esibhalwe ngenombolo engaguquki, esaziwa nangokuthi isishunqo esiqinile, kanti esokugcina siyisipikili esishintshekayo.
Ububanzi bokuvula bewrench ehambayo bungashintshwa ngaphakathi kwebanga elithile. Kuyithuluzi lokubopha nokukhulula amantongomane namabhawodi wezincazelo ezahlukahlukene. Isikrufu esishintshayo sakhiwa yikhanda nesibambo, kanti ikhanda lakhiwe ngendebe yepuleti ehambayo, indebe eqinile, umlomo wepuleti, i-turbine ne-pin shaft.
I-spanner efile esaziwa nangokuthi i-wrench eqinile, ikakhulu ihlukaniswe yaba ukusonta okuqinile okuphindwe kabili nekhanda elilodwa lokudonsa okuqinile. Inemisebenzi ehlukahlukene, ikakhulukazi ekulungisweni kwemishini, okokusebenza, ukuhlobisa ikhaya, ukulungisa izimoto nezinye izigaba. Ukudonsa okuqinile okuphindwe kabili kuyithuluzi elijwayelekile, elidingekayo ekuhlanganiseni amathuluzi emishini noma izingxenye ezisele, ezokuthutha nokulungiswa kwemishini yezolimo.
Langaphambilini I-Woodworking saw blade, i-aluminium saw blade, i-carbide saw blade, amathuluzi wokusika
Olandelayo: Ukudonsa kweheksagoni, ukusonta kwekhanda eliyindilinga, ibhokisi lesikhawundi seheksagoni, uhlobo lwebhola leheksagoni
Iheksagoni ukusonta, flat ikhanda hexagon ukusonta, ibhokisi h ...
Isikelo, isikele se-PVC, umsiki we-PVC, ipayipi lamanzi ...
Ipayipi lokudonsa ipayipi, ukusindwa kwepayipi lepulasitiki elisindayo.
Amathuluzi wefayela lensimbi, ifayela lensimbi, insimbi eqinisiwe ...
Isishubhu, ummese we-putty, isibambo sokhuni, i-plastic ha ...
Izinga, ileveli kazibuthe, ileveli ye-aluminium, ingxubevange ye-lev ...